Ny WordPress plugin dia manana ny endriny tsy manam-paharoa, ny mombamomba azy manokana ary ny endri-javatra sasany izay hifanaraka amin'ny raharaham-barotrao. Misy karazana plugins maimaim-poana an'arivony tapitrisa, nefa ny WordPress plugin dia tsy manana fomba hafa ahafahanao manova azy ary manatsara ny asany araka ny zavatra takinao sy ny andrandrainao. Na dia sarotra be aza ny manosihosy ny mpanjifa ao amin'ny Internet, dia mbola afaka mamorona Plugins mahatalanjona ianao ary mampitombo ny varotrao.
Ross Barber, manam-pahaizana ambony indrindra amin'ny Semalt Digital Services, dia mifantoka amin'ny hoe takatry ny orinasa sy ny mpandraharaha fa tsy te-handoa mafy ny WordPress plugins ireo mpampiasa. Izany no mahatonga ny ankabeazan'ireo plugins ho tsy misy vidiny sy maimaim-poana, izay midika fa azonao atomboka maimaim-poana, manamboatra ary mametaka azy ireo. Ny mpamorona sy ny injeniera maro samihafa dia manome vahaolana marevaka amin'ny olana mifandraika amin'ny plugin, ary ny vidiny dia mazava ho azy. Miankina amin'ny fepetra takian'ny raharaham-barotrao, azonao atao ny misafidy ny plugins malalaka na ny dikan-teny voaisa.
Fantaro ireo vidin'ny WordPress plugins
Natao ho an'ny mpividy tsirairay ny plugins tsirairay isankarazany, ary ny lany dia miova arakaraka ny fotoana noraisin'ny mpanoratra azy. Ny Plugins WordPress dia tonga amin'ny ankapobeny, ary ny vidiny dia tsy mitovy amin'ny orinasa na orinasa..Ny vidin'ny plugin dia singa amin'ny zavatra roa lehibe: ilay mpandrindra izay namorona plugin manokana ary ny fotoana noraisiny mba hamoronana sy hanombohana ny plugin raha tsy manelingelina ny kalitao. Raha toa ianao ka vaovao amin'ny WordPress ary tsy mahalala na inona na inona momba ny plugins sy ny vidiny, dia tokony hitadidy ireto hevitra manaraka ireto ianao:
1. Anontanio ary fantaro ny fahasarotan'ny plugin WordPress anao:
Voalohany indrindra dia tokony hangataka manodidina anao ianao mba hahalalanao ny tombantombana momba ny fomba fiasan'ny plugins sy ny fomba fiasany. Mba hahafantaranao ny fahasarotan'ny WordPress plugin anao, dia tsy misy solon'tsoron'ny manam-pahaizana IT. Raha fantatrao ny zava-drehetra momba ilay mpandrindra ary fantaro ny habetsaky ny plugins efa natombony dia ho mora aminao ny handinika ny vidin'ny plugin. Ho an'ity fikasana ity, afaka miditra amin'ny forum ofisialin'ny WordPress, WordPress subreddits, ary WordPress vondrona amin'ny aterineto. Mametraha fanontaniana ary mifandraisa amin'ireo zokiolona mba hahafantatra hoe ohatrinona ny plugin iray hividy anao ary iza no mpanoratra tsara indrindra amin'ity orinasa ity.
2. Ny tahan'ny karatra WordPress
Miharihary fa ny isan-jaton'ny plugins ampiasain'ny WordPress dia hiovaova ary hiankina amin'ny habetsahan'ny hevitra sy ny fanehoan-kevitra tsara azony. Amin'ny ankapobeny, ny manam-pahaizana WordPress sy ny mpikaroka dia mahatsapa fa ny vidiny dia tsy mety mitovy amin'ny plugins samihafa izay natao hanatanterahana asa maro.
3. Famakiana amin'ny ankapobeny
Tokony hiezaka ny hahatakatra ny fahasarotan'ny plugin ampiasain'ny WordPress alohan'ny hanombanana ny vidiny. Ny plugin dia sarotra kokoa, ny ambony dia ny tahan'ny. Ny plugins izay hitanao ao amin'ny kaontinao WordPress dia manao ny laharana voafaritra sy tsy manana karazan-javatra maro. Ary raha manana tranonkala matihanina ianao na te-hanitatra ny raharahanao amin'ny fotoana tsy voafetra dia tsy tokony hiantehitra amin'ireo plugins malalaka ianao fa kosa misafidy ny Plugins izay ampiasain'ny WordPress izay handoavana $ 10 ka hatramin'ny $ 900 Source .